ကျွန်တော့်နှလုံးသားက မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ အတူတူပါပဲဟုဆိုလာတဲ့ အာင်လအင်ဆန် – CharTake
chartake | February 5, 2021 | News | No Comments
ကျွန်တော့်နှလုံးသားက မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ အတူတူပါပဲဟု ဆိုလာတဲ့ အောင်လအင်ဆန်
ကျွန်တော့်နှလုံးသားက မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ အတူတူပါပဲဟု အောင်လအင်ဆန်က ဆိုပါသည် ။ အောင်လအင်ဆန်က ၄င်း၏လူမှုကွန်ရက်တွင် ချစ်ခင်ရပါသောမြန်မာနိုင်ငံသားများခင်ဗျား ….
အခုအချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မြင်တွေ့ကြားသိနေပါတယ်။ အားလုံးပေးပို့တဲ့ သတင်းစကားတွေ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်မတော်(စစ်တပ်) က အာဏာသိမ်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ပြီးတော့အားလုံးလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ဒေသနဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစုအကြောင်း အားလုံးသိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်နှလုံးသားက အားလုံးနဲ့အတူတူပဲဆိုတာ သိမှာပါ။ ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံက ကချင်တိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်ကလေးကတည်းက ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတာပါ။ဒီအခြေအနေအဖြစ်အပျက်တွေက ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့၊ ကျွန်တော့်လုပ်နိုင်စွမ်းထက် အများကြီးပိုတဲ့အခြေအနေပါ။
ကျွန်တော်က ကိုယ်ခံပညာပေါင်းစုံ အားကစားသမားတစ်ဦးပဲဖြစ်ပြီးတော့၊ နိုင်ငံရေးသမားတယောက်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်း သည်အဖြစ်အပျက်တွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင် အဖြေရှာနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးက စိတ်ပျက် လက်ပျက်ဖြစ်နေပြီး စိတ်ထွက်ပေါက်ပေးဖို့အတွက် လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့၊ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်အမြဲရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို ဝေဖန်ထောက်ပြပြီး သတင်းစကားပေးပို့တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိကျွမ်းတဲ့အရာကအားကစားပါ။ ကျွန်တော်ကအားကစားသမားပါ၊ နိုင်ငံရေးသမားတယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်နေပါစေ ၊မြန်မာနိုင်ငံကို အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ဒီလိုမသေချာမရေရာတဲ့ အခြေအနေမှာ အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးရှိနေဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်အများကြီး မလုပ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှူအဖွဲ့အစည်းကို ပိုမိုမျှတကောင်းမွန်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာစေဖို့ ကျွန်တော်တတ်စွမ်းတဲ့ဘက်ကနေ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်အားလုံးကို ကတိပြုပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ သဘောထားခံယူချက်က မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ အတူတူပဲဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကို ဖော်ပြဖို့အတွက် ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒွိဟဖြစ်ပြီးတွေဝေနေခဲ့တာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မှာလဲ ကျွန်တော့်အခက်အခဲနဲ့ကျွန်တော် ရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားမျှတမှု အစဉ်အမြဲဖြစ်တည်ပါစေလို့ ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပါတယ်။ အားလုံးကိုချစ်ခင်တဲ့ အောင်လအင်ဆန်
To my beloved people,Thank you for all your messages.I want you to know that I hear and see what’s going on in Myanmar. I knowalot of you are sad, frustrated, fearful and even angry. I am too. I am completely saddened by the events of recent days. If you know who I am and who my family is, you know my heart is with the people. I am ethnic Kachin and I know your struggles.
I also want to apologize if I offended anyone with any social posts or comments made earlier this week. Because I’m so passionate and proud of my country, my messages came straight from the heart and may not have been put in the best way.
My platform is athletics, not politics, and this is all much bigger than me. But please know that all I want is the best for Myanmar. During these uncertain times, unity is of utmost importance and I promise you that I will try my best to make our society more equitable.I pray for Myanmar and all of its people.Love, Aung La Nsang
သူအိပ်တဲ့ဘိလိယက်ခုံဘေးက အိပ်ယာမှာပဲအသက် ထွက်သွားရတဲ့ စနူကာ မြန့်မာ့လက်ရွေးစင် ကစားသမား ချစ်ကို